Miroso amin'ny fifaninanana fiaramanidina Aostralia: Afaka tafavoaka velona ve ny tsirairay?
Tsindrio raha hiaraka amin'ny hetsika mivantana atsy ho atsy
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Aostralia » Miroso amin'ny fifaninanana fiaramanidina Aostralia: Afaka tafavoaka velona ve ny tsirairay?
Vonoy ny doka (kitiho)
Vaovao momba ny dia any Aostralia • Vaovao momba ny fiaramanidina • etn • Lahatsoratra mampiavaka • fanorenana • Vaovao momba ny fizahantany • Travel • Travel Associations News • Toerana fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana
George Woods, mpiara-miasa amin'ny LEK Consulting sy Strategic Advisory Firm, izay mitarika ny fampiharana fiaramanidina ao amin'io faritra io, dia nanatevin-daharana azy ireo tamin'ny ekipa manam-pahaizana momba ny fiaramanidina 3 momba ny fifaninanana fiaramanidina Aostraliana tamin'ny 2021.
Rehefa avy nandalo fanidiana maro noho ny areti-mandringana COVID-19 dia toa manomboka manomboka indray ny dia.
Raha mbola mbola ho avy ny fitsangatsanganana an-tsisintany, aiza ho aiza isika amin'ny tsenan'ny dia an-trano mpifaninana?
Inona ny fangatahana fiaramanidina ifotoran'ny mpandeha handeha?
Nanatevin-daharana an'i Woods amin'ity adihevitra fifaninanana fiaramanidina Aostraliana ity i Cameron McDonald, lohan'ny fikarohana tao amin'ny E&P, izay nitondra traikefa an-taonany maro tamin'ny fikarohana momba ny fampiasam-bola nanerana ny vanim-potoanan'ny E&P, ary talohan'izay dia ny Deutsche Bank no mandrakotra ny sehatry ny fitaterana. Talohan'ny nidirany tao dia i Cameron koa dia tao amin'ny Hastings Funds Management ho talen-korana ary koa tao amin'ny UTA izay nanompoany tao amin'ny birao tao amin'ny seranam-piaramanidina Perth.
Anna Wilson, izay avy amin'ny Frontier Economics, dia manam-pahaizana manokana momba ny microeconomics manerana ny Pasifika ary mpahay toekarena manokana amin'ny resaka fitaterana sy ny lalàna mifehy. Izy izao dia mitarika ny fampiharana fitaterana ary mitondra traikefa hiarahana amin'ny mpanjifa manerana ny sehatry ny seranam-piaramanidina amin'ny tambajotra, ny lalàna mifehy ary ny resaka faminavina mialoha ny tsena.
Rod Sims, filohan'ny Vaomieran'ny fifaninanana sy mpanjifa aostralianina (ACCC), no seza lava indrindra amin'ny tantaran'ny ACCC. Talohan'izay dia izy no filohan'ny filan-kevitry ny fifaninanana nasionaly, ary talohan'izay dia nanana asa tena nahomby tamin'ny naha-consultant stratejika nipetraka tamina birao marobe ary koa tao Canberra ho sekretera an'ny PMNC. Vakio ny - na mipetraha ary mihaino - izay nolazain'ity tontonana miavaka ity nandritra izany CAPA - Ivotoerana fiaramanidina hetsika:
Manana fotoana mahaliana mialoha isika. Amin'ny vanim-potoana ara-dalàna isika dia mipetraka eo amin'ny tsenan'ny fiaramanidina anatiny izay ahazoana tombony, izay misy ny mpivady tanàna be atao indrindra fahefatra eran'izao tontolo izao. Saingy nijanona ny indostria, eo am-panaovana fanarenana, na eo amin'ny sehatry ny indostria izay ahitantsika ny fanombohan'ny VA sy Rex na fanombohana indray ny VA ary i Rex manomboka ny orinasany lehibe. Ary aiza no ahitantsika ireo mpanjifa mamerina ireo mpandeha. Nandia hidin-trano maromaro izy ireo.
Mihidy ny sisintany iraisampirenena, ary heveriko fa ny ankamaroan'ny olona dia miaiky fa lavitra be ny dia iraisam-pirenena, saingy manomboka mahita ireo solofony maintso ao an-toerana isika. Ka raha ny resaka androany dia nieritreritra aho fa mety hiresaka zavatra vitsivitsy isika. Azontsika atao ny miresaka manodidina ny tsena sy ny fahitany, ary avy eo miditra amin'ity tontolon'ny fifaninanana anatiny ity. Azoko atao ny manomboka amin'ny fanontaniako amin'ny tontonana hoe aiza izy ireo no mieritreritra fa ao anatin'ny fanarenana isika. Angamba, Cameron, tianao ve ny hanome anay ny eritreritrao momba ny toerana ahitanao ny tsenan'ny fiaramanidina afaka kelikely?
Azo antoka. Misaotra, George, ary miarahaba ny rehetra amin'ny fivoriana anio tolakandro. Mikasika ny toerana ahitako ny tsena amin'izao fotoana izao, ary izaho dia mandrakotra ny Qantas sy ny seranam-piaramanidina Sydney ho toy ny tolo-kevitra momba ny fampiasam-bola. Hitantsika ho marefo dia marefo ny tsena. Araka ny nomarihinao, ny sisintany iraisampirenena dia nikatona foana, ny fijery iraisam-pirenena dia toa hoe hikatona mandritra ny fotoana maharitra. Ary tsy ny finiavan'ny zotram-piaramanidina hiasa fotsiny na ny fahaizana miasa. Izy io koa dia ny tontolon'ny fangatahana ifotoran'ny mpandeha. Ka tsy ho vonona ny hiverina amin'ny fiaramanidina fotsiny izy ireo, fa ho toy ny fiantohana fitsangatsanganana, fitsaboana, ary koa amin'ny tsena itodihan'izy ireo izay hitantsika. Ka heverinay fa izany dia hanosika ny fanarenana amin'ny tsena iraisam-pirenena mandritra ny fotoana maharitra.
Eo amin'ny tsena anatiny dia misy tsimoka maitso. Averina indray fa mihetsiketsika be izy io ary nahita ny praiminisitra miorina  haingana dia haingana hanidy ny sisin-tany, amin'ny tranga sasany ao anatin'ny adiny iray. Ka izany dia mahatonga ny fandaminana ny fialantsasatra sy ny dia ataon'ny orinasa ho tena sarotra tokoa. Ary mety hiafara amin'ny fanaovana an'io bebe kokoa ianao ary amin'ny fivoriambe Zoom sy virtoaly amin'ny fomba fijery raharaham-barotra. Ary heveriko fa mety hahita farany hanao fanaovana fialantsasatra be mpiorina kokoa ianao noho ny interstate ao anatin'ny fotoana fohy alohan'ny hanombohantsika mahita ny tombotsoan'ny vaksinina voahidy. Ka noho izany dia hitantsika fa misy fanamby lava manitatra ho an'ny tsena iraisam-pirenena, fa ny sasany kosa manitatra fanamby sy toe-javatra misavoana eo amin'ny tsena anatiny mandritra ity taona kalandrie ity.
Page 1 ny 6 Prev Manaraka
Kenya Airways sidina farany London
Volaris: 93% ny fahafaha-manao 2020 miaraka amin'ny 87% entana tamin'ny martsa 2021
Bangladesh, ilay niharan'ny COVID manaraka, dia mampiato ny ...
VIA Rail dia mamerina ny ampahan'ny Toronto-Winnipeg an'ny ...
Vail Resorts dia manambara ny fanovana nataon'ny mpitarika
Tetikasa fikarohana vaovao no kendrena hampilamina ny toerana anaty ...
Accor dia nanambara ny hotely Mövenpick faharoa any Aostralia
Ny fandaniam-poana amin'ny sakafo dia mitaky fiheverana bebe kokoa amin'ny dia sy ...